ပေါက်ဆီ | Colourful Recipes
Shrimp biryani →
… ချက်၊ စားနည်း …
ဗီယက်နမ် ဆိုင်က ၀ယ်လာတဲ့ ဒီ တံဆိပ် နှင့် လုပ်ထားသော ပေါက်ဆီ ဖြစ်ပါတယ် .
အထုပ်မှာ ပါတဲ့ ချက်နည်း အညွှန်း အတိုင်းပဲ အိမ်မှာ ချက်ထားပါတယ် ….
အသား အတွက် ..
နှုတ်နှုတ်စင်းထားသော ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်း
ပဲငံပြာရည်အကြည် အနည်းငယ် နှင့် အတူ
ဟင်းခတ်မှုန့် အနည်းငယ် …
ဇွန်းဖြင့် နှယ်ထားလိုက်ပီး …
( ကြက်ဥပြုပ် တခြမ်းကို လေးစိတ် စိတ်ထားသော ကြက်ဥပြုပ် –3လုံး … လှီး .. စိတ်ထားသော ၀က်အူချောင်း )
ဂျုံ အတွက် …
အထုပ်ထဲက ဂျုံ မှုန့် တွေကို ဇလုံထဲ ထည့်ထားပီး
နွားနို့ – 1 cup
ဆီ – 1 tbsp ( ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း ) … ဖျော်ထားပီး
ဂျုံမှုန့် ခွက်ထဲကို ဖြည်းညင်းစွာ လောင်းထည့်ပီး ဂျုံနှယ်ထားလိုက်ပါ …
ပေါက်စီ လုပ်ဖို့ ဂျုံမှာ ပါဝင်သော ပစည်းများ .
နွားနို့ နှင့် ဂျုံကို နှယ်တာမို့ ၃ မိနစ်လောက် နှယ်အပီး မြင်ရပုံ …
၅ မိနစ်ကျော်မှာ နှယ်ပီး မြင်ရပုံ
ရေစို အ၀တ်ဖြင့် ၂ နာရီလောက် အုပ်ထားပေးလိုက်ပါ …
၂ နာရီ အကြာမှာ …
ဂျုံလုံးကို စားပွဲပေါ် ဂျုံမှုန့် အနည်းငယ် ဖြူးပီး …
နှပ်ထားတဲ့ ဂျုံကို လက်ဖနောင့်ဖြင့် ဖိ … ဖိ ပီး နှယ်ထားပေးလိုက်ပါ။ …
ပီးမှ … ဂျုံကို အချောင်းလေး လိမ့် လိုက်ပီး …
ပေါက်ဆီ ဆိုဒ် လောက် ဓါးဖြင့် လှီးစိတ်ထားလိုက်တယ် …
( ကိုယ့် အတွေ့အကြုံ နှင့် ဆိုလျှင် )
ဆီဖြင့် ကျော်စားမယ့် မုန့်တွေကို …. ဂျုံ နှယ်တဲ့ အခါမှာ စားပွဲပေါ်မှာ ဆီ အနည်းငယ် သုပ်ပီး ဂျုံ လိမ့်ပါတယ် … ( ဥပမာ – ပူရီ ၊ အီကြာကွေး )
ဖုတ်မယ့် … ပေါင်းမယ့် မုန့်တွေကို .. ဂျုံနှယ်တဲ့ အခါမှာ စားပွဲပေါ်မှာ ဂျုံမှုန့် အနည်းငယ် ဖြူးပီး ဂျုံ လိမ့်ပါတယ် … ( ဥပမာ – ပေါက်ဆီ၊ ပေါင်မုန့်၊ ကွတ်ကီး cookie cutter )
ဂျုံ နှယ်တဲ့ အခါမှာလည်း … ဂျုံမှုန့် ခွက်ထဲကို ရေ ( သို့ ) ဆီ ( သို့ ) ထောပတ် အရည် ဖြည်းညင်းစွာ လောင်းထည့်ပီး လက်တဖက်က ဂျုံကို အဆက်မပြတ် နှယ်သွားပါတယ် …
ရေ ထည့်ထားတဲ့ ခွက်ထဲကို ဂျုံမှုန့် ထည့်ပီး နှယ်သွားတာ မဟုတ်ပါဘူး …
ဂျုံကို လက်ဖနောင့်ဖြင့် ဖိ နှယ်ပေးလိုက်ပီး ဂျုံသား ညက်သွားပီ ဆိုလျှင် …
ဂျုံ ချောင်း လုပ်လိုက်ပါ..
ဂျုံမှုန့် အနည်းငယ် ဖြူးထားတဲ့ စားပွဲပေါ်မှာ .. ဂျုံ ကို တင် ပီး လက် နှစ်ဖက် နှင့် တပြိုင်တည်း လိမ့်သွားပါ ..
ဂျုံကို လက် ၂ ဖက် နှင့် လိမ့်လိုက် .. အစွန်း ဘေး ၂ ဖက်ကို လက် ၂ ဖက်နှင့် ဆွဲလိုက် …
ဂျုံကို နောက်တခါ .. လက် ၂ ဖက်နှင့် စု ပီး လိမ့်နေရာကနေ .. လိမ့်ရင်း လိမ့်ရင်း လက် ၂ ဖက်ကို ကားကားပီး လိမ့်လိုက် …
အဲလို လိမ့်လိုက်ရင် ဂျုံ အချောင်း ရှည်ရှည်လေး ရမယ်လို့ …
ပီးမှ .. ပေါက်စီ အရွယ် လောက်ကို ဓါးနဲ့ စိတ်ထားလိုက်ပါတယ် …
လှီးဖြတ်ထားသော ဂျုံ အလုံးကို … စားပွဲပေါ် ဂျုံ မှုန့် အနည်းငယ်ဖြူး ပီး ဂျုံလုံးကို လက်ဖ၀ါးဖြင့် အုပ်ပီး လိမ့်ပေးလိုက်ရင် … ဂျုံလုံးလေး တဖြည်းဖြည်း ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် …
ပီးမှ ဒလိမ့်တုံး ဖြင့် အပြားလိမ့်လိုက်တယ် …
ဂျုံပြား ၀ိုင်းဝိုင်းဖြစ်ဖို့ …
ပထမ – တည့်တည့် လိမ့် ( – )
ဒုတိယ – ဘေးတိုက် လိမ့် ( – )
တတိယ – ညာ တစောင်း လိမ့် ( – – )
ဘယ်တစောင်း လိမ့် ( – – )
လိုက်ရင် ဂျုံပြား ၀ိုင်း ၀ိုင်းလေး ရပါလိမ့်မယ်….
နှယ်ထားတဲ့ အသား ကို ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်းထည့်ပီး၊ ကြက်ဥပြုပ် တစိတ် နှင့် အတူ ၀က်အူချောင်းထည့် ..
ဂျုံ အနားစတွေကို အပေါ်ကို မ .. စု … လာပီး တခု နှင့် တခု ထပ် … ထပ်ပီး စု လိုက်ရင် ….
ဒီလိုပုံစံ ထွက်လာပါလိမ့်မယ် ….
( ကိုယ့်ရဲ့ First time မို့ မညီ ညာ တာ သည်းခံပါရှင် )
ပီးရင် … အပေါ်စ ဂျုံကို လက်နဲ့ လိမ်ပီး ထုံးလိုက်ရင် ပေါက်စီ အစာသွပ်ထားတဲ့ အပေါက် ပိတ်သွားပါလိမ့်မယ် …
ကွတ်ကီး paper ကို ဖြတ်ပီး ပေါက်ဆီအောက်မှာ ထားပီး ပေါင်းပါ …
နောက်တနည်း … ကိုယ် ပန်းပွင့်ပုံ ပေါင်မုန့်မှာ … အုန်းသီး အစာသွပ်သလို သွပ်ပီး ဒီလိုမျိုး အစာသွပ် အပေါက် ပိတ်မယ့် နေရာမှာ ကွတ်ကီး paper ကို ဖြတ်ပီး ကပ်လိုက်တဲ့ အခါ … တဖက်ကို လှန်ကြည့်လိုက်ရင် ဂျုံလုံး ၀ိုင်း ၀ိုင်း ပေါက်ဆီ အလုံး ကို မြင်ရပါလိမ့်မယ် …
ဒီတခါတော့ … ပေါက်ဆီကို ပေါင်းအိုး နှင့် ပေါင်းလိုက်ရင် ဘယ်လိုပုံစံ ထွက်လာမလဲးလို့ … ဒီအတိုင်းပဲ အတွန့်ဘက်ခြမ်းကို ယူလိုက်တယ် ..
ပေါင်းအိုး .. ဇကာမှာ တင်ပီး .. အောက်က ရေထည့် .. မီးအားပြင်းပြင်း High Heat နှင့် မိနစ် ၂၀ ပေါင်းလိုက်ရင် …
ဒီလို အနေအထား နှင့် ပေါက်ဆီကို ရပါတယ် …
အထဲမှာ ၀က်သားပေါင်း နှင့် အတူ .. ကြက်ဥပြုပ် . အသားလည်း ကျက်တယ် …
ဒါက ပေါက်ဆီ အလုံး …
ကလေးများက … sweet chili sauce နှင့် စားပီး .. လူကြီးများက ငရုတ်ဆီ
Aluminium foil ထဲ ထည့်ပီး … သူ့ အဖုံး နှင့် သူ ဖုံးပေးထားလိုက်တော့ ကြာရှည်ခံတယ် …
ပေါက်ဆီကျတော့ အသားပါတော့ ရေခဲသေတာပေါ့ .
နောက်တရက် ပြန်စားတဲ့ အခါမှာ … ပေါင်းအိုး ထဲ ရေကို ဇကာအောက် အထိ ထည့်ပီး .. ဇကာပေါ်မှာ မျက်နှာသုတ်ပုဝါ အသေးလေး ခင်းပီး အပေါ်ကနေ ပေါင်းပီးသား ပေါက်စီ တင် … ၅ မိနစ် …(သို့ ) ၁၀ မိနစ် … လောက် ပေါင်းလိုက်ရင် .. စားလို့ ကောင်းတယ် .
သူ့ ဂျုံမှုန့် အချိုးအစားက ရောင်းတမ်းဝင် ပေါက်ဆီ ဂျုံ အရသာမျိုးမို့ ပိုကြိုက်ပါတယ် ..
ပြောပြချင်တာက ပေါက်ဆီလည်း အထားခံတယ်လို့ … ပြန်နွေးစားလို့ ရတယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးချင်တာပါ …
By Thet Nandar • Posted in Cooking Ingredients, Pork - Steam, Pork Recipe, Steam Recipe, Traditional Foods	• Tagged breakfast, dessert, food